Ekspera | mandimby maharo
Posted on 9 August 2012 by Mandimby Maharo
-Mety tsy ho tantin’ny olona intsony ny fiandrasana ka arosoy amin’ity taona ity ny fifidianana solombavam-bahoaka-. Hevitra avy amin’ireo manampahaizana momba ny fifidianana avy eto an-toerana io taorian’iny famoahan’ny Ceni-t ny paik’androm-pifidianana ny 01 aogostra teo. Namafisiny tamin’izany fa raha ny traikefa nananan’izy ireo dia lava loatra io fepotoana fanomanana io. Raha ny resaka teknika hoy izy ireo dia afaka manao fifidianana isika amin’ny volana novambra. Tsy nidika ho fanerena ny fanjakana sy ny Ceni-t ary ny vondrona iraisam-pirenena izay nankatoa avy hatrany iny drafitra iny nefa izao fanambarana izao. Ny vondrona iraisam-pirenena izay nandefa ny manam-pahaizany rahateo nandrafitra iny paik’andro iny. Io indrindra ny nahasanganehana ireto manampahaizana malagasy ireto satria toa tsy nohenoana akory izy ireo fa dia nionona tamin’ny fanarahana ny toro lalana avy any ivelany fotsiny ny fanjakana.
Raha hiresaka traikefa tokoa nefa dia samy misy azo kianina ny rehetra. Eo aloha ny iraisam-pirenena izay matetim-pitsabaka amin’ireny fifidianana tanterahina maneran-tany ireny. Raha ny taty Afrika fotsiny ohatra dia niaraha-nahta ny nataon’izy ireo tatsy Côte d’Ivoire. Na dia maro sy nahery vaika ary ny filazana fa tsy nanaraka ny tena safidim-bahoaka ny fifidianana filoham-pirenea natao tamin’ny 2011 dia noterena ho lany i Ouatara nanoloana an’ingahy Gbagbo. Nampiasan’ireto vondrona iraisam-pirenena ireto hery mihintsy moa izany rehefa tsy laitrany ny herin’ity farany izay be mpanohana. Teo koa ireo fifidianana maro tanterahina any amin’ireo tany arabo vao avy nahazo « fahafahana » ka migoka ny « demokrasia ». maro ny tsy fetezana ary lasa miteraka fisaraham-bazana eo amin’ireo mponina iray tanindrazana mihintsy ary ireny fitsabahana ireny, saingy ankatoavina sy teren-ko masaka ihany.
Raha midoka tena koa nefa ireo manam-pahaizana malagasy fa be traikefa satria efa hatramin’ny taona 1960 no nanao fifidianana isika dia toa mamita tena ihany. Iaraha-manaiky fa fifidianana hatrany no niteraka olana teto Madagasikara. Na lany tamin’ny isam-bato mavesatra ary ny filoha Tsiranana dia niteraka olana io fahalaniany io noho ny hala-bato. Saritsarim-pifidiana,na ihany koa no nidiran’ny Amiraly Ratsiraka teo ary nitazonanay ny firenena. Tolom-bahoaka ary narahin’ny fifidianana no nametrahan’i Zafy ny dian-tanany teo amin’ny fitarihana ny firenena. Tsy nahaleo ny kajy politika nefa izany fifidianana demokratika izany ka dia nandao ny sezany mialoha ny fotoana ny Profesora. Mbola fifidianana ihany koa no niverenan’dRatsiraka teo indray. Fifidianana toa nampihomehy ihany satria dia halatra no betsaka. Lany tamin’ny fifidianana « premier tour dia vita « koa nefa Ravalomanana ka nampidingin-drambo ny mpifanandrina taminy. Korontana sy krizy no vokatry ny fisalasalana momba ny tena vokam-pifidianana. Ary dia mbola fifidianana be-ny tanana ihany koa no naha mati-kambo an’dRajoelina ka niheverany fa ho vitany ny mitondra an’i Madagasikara satria lany teto Antananarivo Renivohitra izy ka dia nataony izay fomba rehetra nanonganana izay lanim-bahoaka rehetra teo.
Ireo rehetra ireo no milaza fa tsy misy afaka milaza fa tena mahay fifidianana mangarahara izany eto. Ary ireo koa no porofo fa tsy ny fifidianana fotsiny no ilaina. Misy fepetra maro ny fanaovana ny fiifidianana ; eo ny teknika izay tena miantoka ny fanaovana izany : lisitry ny mpifidy, karatry ny mpifidy, biletà ampiasaina, ny vata, fanangonana ny vokatra, fanisam-bato, famoahana izany ao antin’ny fotoana voafetra. Ilaina koa ny ara-politika : lalana mifehy ny antoko, lalam-pifidianana, fahafahana mirotsaka, … Fa eo koa ny ara-sosialy : fanentanana hifidy, fampianarana ny olom-pirenena, ary indrindra ny fitoniana sy fahafahana misafidy malalaka.Noho izany, Aoka tsy ho variana amin’ny fifanankianan’ny samy be fahaizana ny rehetra fa handinika raha feno avokoa ireo fepetra ireo ka afaka hiroso amin’izany fifidianana izany isika ka tsy hiteraka korontana izany.
Tags: fifidianana, politiqueCategories: politique
2 thoughts on “Ekspera”
9 August 2012 at 1604 31
Ny tany Libye zao omaly dia nomena ny parlemanta izay voafidy vao tsy ela ny fahefana!! Tokony hanao ny tahak’izany koa isika! Mifidy ny parlemantera @ ty taona ity dia ry zareo no omena ny fahefana fa tsy ireo olona tsy voafidim-bahoka ireo
Mandimby Maharo says:
10 August 2012 at 1010 03
‘Transition Pacifique” no niantsoan’izy ireo ny tany aminy.Be ihany nefa ny tsy fetezana hoy uzy ireo. Raha izay no jerena dia mbola hendry ry zareo ka mahay mitsinjo ny ho avy sy manana fanetretena fa tsy be rehereha amin’ny tsy misy vokatra toy ny eto.